Dowladda Federaalka oo ka haddashay war la xiriiray Qaraxyada iyo Qatar – Radio Daljir
Luulyo 23, 2019 5:55 g 0
Wargayska The New York Times ee ka soo baxa dalkan Maraykanka ayaa daabacay maqaal xasaasi oo uu ku tilmaamay dalalka Khaliijka gaar ahaan Imaaraatka iyo Qatar inay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda Soomaaliya.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in ganacsade ku dhow amiirka Qatar uu sheegay in qarax ka dhacay magaalada Boosaaso la fuliyey si “sare loogu qaado danaha Qatar”, qaraxaas oo looga dan lahaa in Imaaraadka laga saaro Boosaaso.
Dowladda Qatar waxay sheegtay inaysan faro-gelin arrimaha gudaha dalalka kale, islamarkaana cid kasta oo sidaas sameysa aysan matalin.
Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad oo wareysi siiyey VOA ayaa sheegay inay arrintan kala hadleen dowladda Qatar ayna beenisay.
Wasiirka waxa uu sheegay inuu u yimid safiirka Qatar ee Soomaaliya, islamarkaana Soomaaliya ay ku qanacday sharaxaaddii uu arrintan ka bixiyey.
Waxaa uu sidoo kale sheegay Wasiir Cawad in dowladda Soomaaliya iyo Qatar ay si wanaagsan arintaasi uga wada hadleen,islamarkaana Qatar ay Caddeysay in aysan ka dambeyn Qaraxa lagu eedeeyay.